Wararka - 2021CMEF: Kangyuan wuxuu horumariyaa Tayada Nolosha ee Sayniska iyo Teknolojiyada
Markay ahayd 13-kii Maajo, 2021-ka, waxaa dalka Shiinaha ka furmay shirkii Carwada Caalamiga ah ee Caafimaadka (84EF) ee 84-aad (CMEF) oo halku dheg looga dhigay "farsamo cusub, mustaqbal caqli leh" oo lagu qabtay Xarunta Shirarka iyo Carwooyinka ee Shanghai. Iyada oo dad aad u tiro badani ay ka soo qayb galeen bandhiggan, bilicda xafladda ayaa ka sarraysay munaasabad ka hor.
Bandhigan, Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd. waxay keeneysaa alaabooyin badan oo cusub, sida silsiladda foornada silikoon leh oo leh buufin isku dhafan, silsilad foornada silikoon leh oo heerkulkeedu sarreeyo, silikoon gastrostomy iyo silikoon tracheotomy tube, taasoo soo jiidatay indhaha dad badan. .
Waxaa la aasaasay 2005, Kangyuan wuxuu daboolayaa aag kudhowaad 20,000m² leh qiime wax soo saar sanadle ah oo ka badan 100 milyan yuan. Waxay leedahay dhammaan khadadka wax soo saarka otomaatiga ah, 4000m² ee fasalka 100,000 qol nadiif ah iyo 300m² sheybaarka fasalka 100,000 oo lagu daray kormeerka gacanta si loo hubiyo amniga iyo tayada alaabada. Ka dib in ka badan toban sano oo horumar joogto ah, Kangyuan wuxuu noqday soo-saare baaxad weyn oo caafimaad u leh soo saaraha Bariga Shiinaha.
Iyadoo leh dareen sare oo masuuliyadeed bulsho
Kangyuan wuxuu ballanqaaday inuu hagaajinayo tayada daryeelka iyo nolosha bukaannada
Si dadweynaha loo siiyo qalab caafimaad oo tayo sare leh oo la tuuri karo
2021CMEF wuxuu ku dhamaan doonaa 2 maalmood
Lambarkayaga waabku waa 8.1ZA39
Kaalay oo fiiri!
Waqtiga boostada: Meey-19-2021